प्रहरीले फेसबुकबाटै थाल्यो सोधपुछ ! – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured प्रहरीले फेसबुकबाटै थाल्यो सोधपुछ !
प्रहरीले फेसबुकबाटै थाल्यो सोधपुछ !
सामाजिक सञ्जालको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीमा दैनिक दर्जनौं गुनासा आउँछन् । हरेक पीडितको चाहना हुन्छ, चाँडै न्याय पाइयोस् ।तर, प्रहरीको काम सामाजिक सञ्जालका स्टाटसमाथि अनुसन्धान गर्ने मात्रै हुँदैन ।कतिपय घटनामा सामान्य विषयमा अनावश्यक हात लागेको भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ । त्यसैले प्रहरीले सामान्य किसिमका घटनासँग जोडिएको विषयलाई सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जालबाटै सोधपुछ गर्न थालेको छ ।
संविधान संशोधन अनिर्वाय- जसपा कपिलवस्तु
कपिलवस्तुमा संविधान दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम